International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Press Release: ASEAN Civil Society Organizations Reaffirms Commitment for Independent Peoples' Forum at 4th Regional Consultation Meeting
Press Release: ASEAN Civil Society Organizations Reaffirms Commitment for Independent Peoples' Forum at 4th Regional Consultation Meeting
ASEAN Civil Society Organizations Reaffirms Commitment for Independent Peoples' Forum at 4th Regional Consultation Meeting
Participants of the 4th Regional Consultation Meeting reinforced their commitment to maintain inclusiveness and independence of the ASEAN Civil Society Conference/ASEAN Peoples' Forum (ACSC/APF) 2014. The ACSC/APF, which will be held in Yangon on March 21-23, could be the largest regional civil society conference held in Myanmar in contemporary history.
The Meeting was attended by 22 representatives from ASEAN member countries and 55 Myanmar civil society representatives. During the two-day preparatory meeting, participants finalized many aspects of the program and agreed on how to move forward in solidarity.
"There are good regulations and principles to ensure the ASEAN Peoples' Forum is accessible, independent and inclusive. We hope we can uphold these values until the final day without obstacles. Last year, President U Thein Sein acknowledged the important role of civil society for national transition, so we hope the authorities will give us their full support and cooperation for this event, and to welcome our regional friends. This event is an important milestone for Myanmar's transition and for the ASEAN Community 2015," said Daw May May Pyone, Executive Director of NGO Gender Group and chair of the Steering Committee of the ACSC/APF.
This year, organizers are expecting as many as 1,200 participants from different levels of Civil Society from across the ASEAN region. Most of the participants are expected to come from grassroots Community Based Organizations (CBOs) and local Non-Governmental Organizations (NGOs).
"This is my first time participating inaRegional Consultation Meeting and I am very happy that I am able to take part in this process. I have learntalot and I am very excited about the forum and hope many Myanmar grassroots organizations are able to attend the ASEAN People's Forum," said Liz Hlaing,amember of the National Organizing Committee.
ACSC/APF events have always been regional events and Myanmar's National Organizing Committee has prioritized regional solidarity and participation.
"I am very pleased with what we have accomplished so far to maintain the regional identity of the ACSC/APF and I would like to give credit to our Myanmar friends for upholding this value toahigh degree. Myanmar has been an important focus of ASEAN civil society since the first ACSC in 2005, so this event is extra special to us all," said Premrudee Daoroung, Co-Chair of the ACSC/APF Steering Committee.
ASEAN Civil Society Conference/ASEAN Peoples' Forum is an ASEAN civil society event first held in Malaysia in 2005 and has been carried on since. Its sole purpose is to channel voices of the grassroots civil societies of different backgrounds from across the ASEAN region.
Since Myanmar has the 2014 ASEAN chair, the responsibility of hosting the ACSC/APF has fallen onto the shoulders of the Myanmar civil society.
View Photos Here ..
Premrudee Daoroung, Co-Chair, ACSC/APF Steering Committee (Thai/English) +66814342334
Debbie Stothard, Co-Chair, ACSC/APF Media Committee (English), Tel +66816861652
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်။
အာဆီယံလူထုဖိုရမ် (၄) ကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အပြီးတွင် အာဆီယံအရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းသော လူထုဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေး ကြိုးစားသွားရန် ထပ်လောင်းအတည်ပြု
အာဆီယံအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများညီလာခံ/အာဆီယံလူထုဖိုရမ် ၂၀၁၄ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ
(၄) ကြိမ်မြောက်ဒေသတွင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (4th Regional Consultation Meeting) တက်ရောက်သူ ကိုယ်စားလှယ် များကအာဆီယံလူထုဖိုရမ်၏ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းမှုနှင့် အများပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ဆက်လက် ကြိုးစားသွားမည့် အကြောင်းထပ်မံအတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်မှ ၂၃ ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံလူထုဖိုရမ်သည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် တက်ရောက်မှု အများဆုံးသောအာ ဆီယံဒေသတွင်းဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အ စည်းညီလာခံ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၄) ကြိမ်မြောက်ဒေသတွင်းငြိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများရှိကိုယ်စားလှယ် ၂၂ ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ် ၅၅ ဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ နှစ်ရက်တာညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်သူ ကိုယ်စားလှယ်များကလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပါအဝင် အခြားသော ကဏ္ဍများအပေါ် ညှိနှိုင်းသဘောတူခဲ့ကြပြီး စည်းလုံးမှုဖြင့်မည်သို့ တက်လှမ်းမည်ကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
"အာဆီယံအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ညီလာခံဟာဝင်ေ ရာက်မှုလွ =ယ်ကူသော၊ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းသော၊ အများ ပါဝင်နိုင်သော ညီလာခံဖြစ်နိုင်ဖို့ကောင်းမွန်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ မူဘောင်တွေကိုကျွန်မတို့ ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစည်းကမ်းမူဘောင်တွေကို လူထုဖိုရမ်နောက်ဆုံးနေ့အထိထိမ်းသိမ်းသွား နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် ကအမျိုးသားပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးအတွက် အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ အရေးကြီးပုံကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအာဏာ ပိုင်တွေအနေနဲ့ ဖိုရမ်ဖြစ်မြောက် ရေးအဖက်ဖက်မှ အပြည့်အဝဝိုင်းဝန်းကူညီပြီး အာဆီယံဒေသတွင်းက တက်ရောက်ကြမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလူထုဖိုရမ်ဟာ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုအတွက်နဲ့ ၂၀၁၅ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းအတွက် မှတ်ကျောက်တစ်ခုပဲဖြစ် ပါတယ်" ဟု NGO Gender Group အဖွဲ့ အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ACSC/APF ဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဌမှ ဒေါ်မေမေပြုံးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ် အာဆီယံလူထုဖိုရမ်ကိုအလွှာအသီးသီးမှ အရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများမှ အဖွဲ့ဝင်များ ၁၂၀၀ ကျော် တက်ရောက် မည်ဟု ဖြစ်မြောက်ရေးစီစဉ်သူများ ကမျှော်မှန်းထားသည်။ တက်ရောက်သူအများစုသည် အာဆီယံတဝှမ်းရှိ အခြေခံ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့ဝ င်များနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအရပ်ဘက် လူ့ထုအဖွဲ့စည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည်။
"ကျွန်မအနေနဲ့ အာဆီယံဒေသတွင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုပထမ ဆုံးအကြိမ် တက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို တက်ရောက်ခွင့် ရတဲ့အတွက်လည်းအ လွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဒီမှာ ကျွန်မအ များကြီးလေ့လာခွင့်ရပြီးလာမည့် မတ်လမှာ ကျင်းပမည့် တကယ့်လူထုညီလာခံကို အတွက်လည်းများစွာ စိတ်လှုပ်ရှားမိ ပါတယ်။ မြန်မာဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင် လစ်လှိုင် မှ ပြောသည်။
ACSC/APF သည် အစဉ်သဖြင့် အာဆီယံဒေသတွင်းနှင့် ဆိုင်သောပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်မြောက် ရေးကော်မတီသည် ၎င်းတို့၏ အာဆီယံဒေသတွင်း အသွင်ဆောင်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်မှု သွင်ပြင်လက္ခဏာများက ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်ရန် ဦးစားပေးကြိုစားခဲ့ကြသည်။
"ACSC/APF ၏ အာဆီယံသွင်ပြင်လက်က္ခ ဏာဆောင်မှုကိုကို ထိမ်းသိမ်းနိုင်စွမ်းအတိုင်းအတာအပေါ် များစွာကျေနပ် ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ အာဆီယံတန်ဖိုးကိုမြင့်မြင့်မားမား အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထားရှိနိုင်မှုအပေါ်ကျွန်မတို့ မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်မ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း တင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက အာဆီယံ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ကြိမ်မြန်မာပြည်မှာ ကျင်းမယ့် အာဆီယံလူထုဖိုရမ်ဟာ ကျွန်မတို့အတွက် ထပ်ဆင့်ကို ထူးခြားပါတယ်" ဟု ACSC/APF ဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင် ကော်မတီတွဲဖက်ဥက္ကဌ ပရီမရူဒီရောင်ရွန်မှ ပြောသည်။
အာဆီယံအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းညီလာခံ/ အာဆီယံ လူထုဖိုရမ်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံမှ စတင်၍ အာဆီယံလူထုအသိုင်းအဝိုင်း၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ကျင်းပလာခဲ့ကြသည်။ ၎င်း၏ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာဆီယံဒေသတွင်းရှိဒေသများအားလုံးမှ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်များအမျိုးမျိုး၏ အသံများကိုစုစည်းတင်ပြနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် ပြည်တောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို အောင်မြင်စွာလွဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီး ဖြစ်ရာ ACSC/APF ကိုကျင်းပရေးတာဝန်သည် မြန်မာအရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပုခုံးပေါ်သို့ ကျရောက်လာခဲ့ သည်။
ဒေါ်မေမေပြုံး - ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးဆောင်ကော်မီ (မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) +၉၅ (၀)၉၅၀၉၆၉၃၅/ +၉၅
ဦးညွှန့်လှိုင် - ဥက္ကဋ္ဌ၊ မီဒီယာကော်မတီ (မြန်မာဘာသာ) +၉၅ (၀)၉၅၀၅၈၂၈၅
ပရီမရူဒီရောင်ရွန် - တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးဆောင်ကော်မတီ (ထိုင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) +၆၆ (၀)၈၁၄၃၄၂၃၃၄
ဒက်ဘီစတောက်ထာ့ - တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌ၊ မီဒီယာကော်မတီ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) +၉၅ (၀)၉၄၂၅၀၁၃၄၂၁ +၆၆ (၀)၈၁၁၆၈၆၁၆၅၂